आई एम सरी बा !
अस्मित सापकोटा काठमाडौं, १३ वैशाख
‘बाबु ! अब घर आऊ । १ महिना सँगै बस्नुपर्छ ।’
बुबा र मेरो पहिलो संवाद त स्मृतिमा छैन । तर, बुबासँगको यो अन्तिम संवादसँगै संवादमा पूर्णविराम लाग्यो । बाको प्रेम घुलित आवाज बारबार मेरो कानमा ठोक्किइरहन्छ ।
हरपल आउने यादलाई कहाँ मेटाउन सकिन्छ र ? यादलाई यादगार बनाउन झन् आइरहन्छन् यादहरू । बाको यादमा कयौँ रात तन्द्रमै बिताएको छु । साक्षी सिरानी छ । बाको यादलाई मेटाउन प्रातःमै सूर्यलाई अर्घन्छु ।
‘मनको शान्ति खोज्दै छु कि, बा ! तिम्रो आत्माको ?’
अनुत्तरित हुन्छु म ।
जन्मसँगै मृत्यु शाश्वत् सत्य हो । न रोक्न सक्छौँ । न छेक्न नै । यदि समय टक्क अडिन्थ्यो भने आज रोकेर राख्ने थिएँ । अनि सँगै राख्ने थिएँ बालाई ।
कल्पनामै हराउँछु म ।
ओहो ! बासँगको संवादमा पूर्णविराम लागेको पनि १ वर्ष पुगेछ । समय बितेको र खोला बगेको पत्तै नहुने ।
यहाँ खोला बगेको देख्दा रमाउँछन् मान्छे । बगरको आर्त कसले पो बुझ्छ र ?
‘बाको सफर कहाँ पुग्यो होला ?’
बाकै पथमा मेरा रहर दौडिरहन्छन् ।
‘बाबु तिमीलाई कस्तो छ ?’
बारबार फोनबाट आउने अमाको प्रश्नले मन निचोरिन्छ । फिस्स हाँसेर आमाको मनलाई शान्त बनाउने कोसिस गर्छु । समय र परिस्थिति ठीक चलेको हुन्थ्यो भने आजको दिन म मातृभूमिमा मातासँगै हुने थिएँ । अनि सँगै बालाई अर्घ चढाउने थिएँ ।
न अन्तिम पटक बाको मुख हेर्न पाएँ । न बाको पहिले तिथिमा अर्घ चढाउन नै ।
मनमा खिन्नताले डेरा जमाउँछ ।
यतिबेला म अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा छु । मन भने मातृभूमिमै छ । तर, चाहेर पनि आउन सक्दिनँ । कारण– कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ।
विश्वमै फैलिएको याे भाइरसकाे महामारीबाट अस्ट्रेलिया पनि अछुतो छैन ।
भाइरसको प्रकोपसँगै निन्द्रा पनि पातलिँदै गएको छ । सूर्यका किरण पृथ्वीमा झर्नुभन्दा पहिले नै मेरा आँखा र हात मोबाइलमा सलबलाउँछन् ।
ओहो ! कोरोना संक्रमित कति पुगे ? नेपालमा के भयो होला ? भय डर र त्रासले विश्व नै आकंकित छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान मिल्दैन । यो समयको सारथी सामाजिक सञ्जाल बनेको छ ।
विशेष कामले १ महिनाअघि अस्ट्रेलियाको प्रदेशीय द्वीप राज्य तास्मानियाबाट सिड्नी आएको । कोरोनाले तास्मानिया फर्कन दिएको छैन । यहीँ दिदी, भाइ, भिनाजुसँगै दिन बितिरहेको छ । अझ भर्खरै जन्मिएकी भान्जीसँगै रमाएर समय बित्छ ।
कोरोनाले सिड्नीमा काम पाउने अवस्था छैन । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई असर परेको छ । पीआर र सिटिजनसिप भएकालाई सरकारले केही राहत देला । तर, पढ्नका लागि अस्ट्रेलिया आएका विद्यार्थी बढी प्रभावित छन् । पढ्दै काम गर्ने विद्यार्थीको दैनिकीमा विश्राम लागेको छ ।
लकडाउनका कारण सबै घरमै हुनुहुन्छ । पहिलेको भन्दा धेरै घरमा हजुरआमा, ममी, बाबा, दिदी दाइसँग एउटै स्क्रिनमा कुरा गर्ने अवसर पनि मिलेको छ । जब स्क्रिनमा हजुरआमालाई देख्छु, तब उहाँको चेहराले बताउँछ – मन पिर र चिन्ताले भरिएकाे छ ।
अनि हाँसोसँगै उहाँको पिरलाई दूर बनाउन खोज्छु ।
नेपालमा कहाँ के हुँदै छ ? अनि बाबासँगै बुझ्छु नेपालको हालखबर । कोरोना भाइरसले नेपालमा नरसंहार निम्त्याउने त होइन ? अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियाजस्तो विकसित देशले त नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा धेरै फैलियो भने के होला ? कामना गर्छु– यस्तो नहोस् ।
अस्ट्रेलिया सरकारले पनि घरबाट ननिस्कन भनेको छ । समूहमा हिँड्न, समुद्र किनारमा जन, पार्कमा बार्बेक्यू गर्न, पार्टी गर्न बन्देज लगाएको छ । यदि उल्लंघन गरे जेलसजायका साथै जरिमाना पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
१ महिनाअगाडिसम्म खुट्टा टेक्नसमेत हम्मेहम्मे पर्ने ट्रेन आजकल खाली खाली हुन्छन् । गाडीको आवतजावत पातलो छ ।
आकाशमा प्लेन पनि देखिँदैन । मान्छेहरू मास्क लगाएर एकअर्काबाट दूरी कायम गरिरहेका छन् । रेस्टुरेन्टहरूमा ग्राहकहरू छैनन् । पुलिसको निगरानी बढेको छ ।
सामान किन्न पसल र घरबाहिर निस्किँदा डाक्टरसँग सल्लाह लिएर मात्रै निस्कने गरेको छु । नेपालबाट अस्ट्रेलिया आएको फुपूको छोरालाई समेत भेट्न पाएको छैन । नेपाल पनि लकडाउनमै छ । यसको औषधि अहिलेलाई घरभित्रै बस्नु हो । हामी सबै यसरी नै बसिरहेका छौँ ।
‘बा ! अनि म कसरी आउन सक्छु नेपाल ?’
संसार देख्ने यी आँखाले तिमीबाहेक अरु केही देखेको छैन । बा ! आफूलाई भुल्न सक्ने यो मनले तिमीलाई भुल्न सकेको छैन । बाँच्नका लागि तिम्रा यादहरू मानसपटलमा घुमिरहन्छन् । युनिभर्सिटाबाट नपाएको शिक्षा तिमीले दिएर गएका छौ । भौतिक शरीर नभए पनि तिम्रा आवाज र ज्ञान अजर र अमर छन् ।
तिम्रो अन्तिम सास र पहिलो तिथिमा उपस्थित हुन सकिनँ । आई एम सरी बा !
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १३, २०७७, १२:४०:००